मार्केटिंग आशयको लागि, नेत्रगोलक होइन Martech Zone
बुधवार, जनवरी,, २०१२ शुक्रबार, डिसेम्बर 6, 2013 Douglas Karr
पुरानो स्कूल मार्केटरहरू सँधै ह hung्ग-अपमा लाग्छ नेत्रगोलकहरूको संख्या। म सँधै डाटाबेस र सिधा मार्केटर हुँ, त्यसैले मैले प्राप्त गर्न मनपराएँ ठिक ती सबैको अगाडि विज्ञापनहरू अगाडि बढाउने भन्दा नेत्रगोलक।
पहेलो पृष्ठहरू जस्तो व्यवसायले ठूलो संख्या पनि टाउट गर्न मनपराउँदछ। मैले त्यो एकचोटि पढें २०० Pop मा अमेरिकी जनसंख्याको% 87% ले पहेंलो पृष्ठहरू प्रयोग गर्‍यो। राम्रो प्रिन्ट पढ्दा यो फोन सर्वेक्षण मार्फत मानिएको थियो। त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू सोध्नु आवश्यक छ जब कसैले तपाईंलाई ठूलो संख्या फ्याक्छ कि जस्तो:
फोन सर्वेक्षण कहिले गरिएको थियो?
सर्वेक्षण गरिएको मान्छेको जनसांख्यिकीय के थियो?
यलो पेजबाट कति रूपान्तरण गरियो प्रयोग?
पहेलो पृष्ठ विज्ञापनदाताका लागि लगानीमा औसत प्रतिफल के थियो?
ती मानिसहरू कुन डेमोग्राफिकमा पुगे? के यो मेरो कम्पनीको लक्ष्य डेमोग्राफिकसँग मेल खान्छ?
के परिभाषा हो प्रयोग?
ठुलो संख्यालाई वेवास्ता गर्दै, पहेलो पृष्ठले के गर्दछ त्यसका लागि जाँदै छ उद्देश्य। जब प्रयोगकर्ताले पहेंलो पृष्ठहरू खोल्दछ, तिनीहरू एक मिशनमा हुन्छन् र त्यो अभियानले सम्भवतः विज्ञापनदातासँगको सगाईको लागि अग्रसर गर्दछ।
खोज इञ्जिनहरूले सब भन्दा बलियो प्रदान गर्दछ उद्देश्य। यदि मैले "सर्वश्रेष्ठ mp3 प्लेयर" खोज्छु भने, सम्भावनाहरू यो हुन् कि म समीक्षा गर्न जाँदैछु र अन्ततः मैले खोजिरहेको कुरा खरीद गर्दैछु। यति धेरै किन छ व्यवसायहरू ब्लग गर्दै छन् - उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूले उनीहरूलाई कसरी खोजिरहेका छन् भन्ने कुञ्जीशब्दहरूको लागि उत्कृष्ट खोज ईन्जिन प्लेसमेन्टको साथ तिनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रदान गर्न।
इन्टरनेट पहेंलो पृष्ठहरु (IYP) केही फरक छ। यी व्यापार निर्देशिकाहरू दुबै उत्कृष्ट खोज इञ्जिन प्लेसमेन्ट र ठूला संख्याहरू टाउट गर्छन्। मेरो विश्वास हो कि IYP ले वास्तवमा तपाईंको व्यवसायमा जडान गर्न नेतृत्वको लागि क्षमतालाई कमजोर पार्दछ किनभने तिनीहरूमा:
निर्देशिका नेभिगेट गर्नुहोस्
निर्देशिकाबाट तपाईंको साइट छान्नुहोस्
तपाईंको साइटमा नेभिगेट गर्नुहोस्
जब तपाई IYP मा प्लेसमेन्ट को लागी खरीद गर्नुहुन्छ, तपाई IYP लाई आफ्नो वेबसाइटको साटो तपाईको व्यवसायको मालिक र गेटवे नै दिनुहुन्छ। थप रूपमा, खोजकर्ता केवल मात्र गर्न सक्दैन खोज, भूमि र रूपान्तरण - तिनीहरूले निर्देशिका नेभिगेट गर्नु पर्छ। धेरै धेरै उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूले धेरै टाढाबाट १ क्लिक गरेर रूपान्तरण गुमाउँदछन्।
लिएर उद्देश्य विचार मा, र ठुलो संख्या होईन, व्यापार सामाजिक नेटवर्क को बारे मा पनि सशंकित हुनु पर्छ। म फेसबुक मार्फत सफलतापूर्वक व्यवसाय प्राप्त गर्ने बारेमा धेरै व्यक्तिहरू बोल्दै छु। त्यहाँ शंका छ त्यहाँ वाणिज्य को लागी एक अवसर छ; तर मलाई एक दर्शकहरु को रूप मा शंका छ उद्देश्य खरीद गर्न।
संक्षिप्तमा, hype लाई बेवास्ता गर्नुहोस् र तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग लगानीहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस् जहाँ अभिप्राय र अवसर सबैभन्दा ठूलो हुन्छ:
राम्रो खोज इञ्जिन प्लेसमेन्टको साथ सुरू गर्नुहोस् - तपाईंको अनलाइन स्टोर अप्टिमाइज वा माथिको माध्यमबाट कर्पोरेट ब्लगि.
अन्य सामाजिक माध्यमहरू मार्फत त्यो सामग्रीको लाभ उठाउनुहोस्।
सम्मिलित अपसेट र रिटेन्सन रणनीतिहरूमा काम गर्नुहोस् इमेल मार्केटिङ र मोबाइल मार्केटिङ.
तपाईंको २०० Marketing मार्केटिंग रणनीतिमा प्रेस विज्ञप्तिहरू राख्नुहोस्
जनवरी १, २०१ 28 १२::2009 अपराह्न
लेखले ठ्याक्कै भनेको छैन, तर म शर्त राख्न तयार हुन्छु कि यो सर्वेक्षणले केवल होम टेलिफोनहरू समेट्यो। स्पष्ट रूपमा यसले त्यस्तो किसिमका मानिसहरूलाई समावेश गर्दछ जुनसँग घर टेलिफोन छैन वा त्यस्ता सर्वेक्षण लिन चासो राख्दैन। मलाई लाग्छ कि सर्वेक्षणको अन्तिम परिणाममा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्दछ।
जनवरी 29, 2009 मा 12: 36 एएम
म तिमीलाई जेम्ससँग सहमत छु। म सँधै 'टेलिफोन सर्वेक्षणहरू' को लेरी हुँ किनकि अनलाइन डेमोग्राफिकमा यति धेरै मानिससँग घर फोन छैन, उनीहरूको घरको फोनको जवाफ नदिनुहोस्, वा तिनीहरू सर्वेक्षणको काम पूरा हुने घण्टामा वास्तवमै काममा छन्।
मलाई लाग्छ कि म तपाईको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छु - पहेलो पृष्ठहरु टेलिफोन सर्वेक्षणको लागि प्रयोग गरिएको कार्यविधि बारे।
साक्षात्कार नयाँ वर्ष, धन्यवाद र क्रिसमस बाहेक वर्षको हरेक दिन आयोजित गरिन्छ।
नियोजित मेडथोलॉजी अनियमित अंक डायल हो जसको मतलब प्रत्येक ल्याण्डलाइन फोन नम्बर सर्वेक्षणको लागि छनौटको बराबर अवसर छ। यस पद्धतिले एउटा नमूनामा परिणाम दिन्छ जुन सम्पूर्ण यूएस वयस्क जनसंख्याको लागि प्रोजेक्ट हुन्छ।
The 86% व्यक्तिले उनीहरूले पहेंलो पृष्ठलाई सन्दर्भित गरे भनेर भने कि उनीहरूले पहिले नै खरीद गरिसकेका थिए वा त्यसो गर्ने मनसाय राखेका थिए।
स्थानीय प्रदर्शन विज्ञापन बाट लगानी मा औसत वापसी लगानी को हरेक $ 13 को लागी राजस्व को १$ $ छ।
सर्वेक्षणको प्रबन्धको तरीकाको कारण, डेमोग्राफिक प्रोफाइलले अमेरिकी वयस्क जनसंख्या दर्पणमा आइपुगेको छ। सामान्य पहेलो पृष्ठ प्रयोगकर्ताहरू २-25--49, कलेज ग्रेड, HH आय> $ K० के, परिवार आकार>,, बितेको वर्षमा ++ पटक सारियो, र उनीहरूको हालको स्थानमा एक बर्ष मुनि रहेका थिए।
प्रयोगकर्ताको परिभाषा त्यो हो जसले एक डाइरेक्टरी खोल्छ र एक वा बढी विज्ञापनमा हेर्छ।
वाह - यस ल्यारीमा विस्तृत जानकारीको लागि धन्यवाद!
जनवरी 29, 2009 मा 11: 34 एएम
म पनि सहमत छु। हामीले फेला पार्यौं कि जानकारी बजार संस्थानमा यस्तै हुन। अनलाइन अवसरहरूको पकड प्राप्त गर्न जाने बाटो हो। ह्याक मैले प्रक्रियामा मेरो आफ्नै ब्लग पनि प्राप्त गरे। यसलाई जाँच गर्नुहोस्: http://infomarketingstarter.blogspot.com/